Warbixintii 3aad: Baarlamaan Noocee ah ayay maanta u baahantahay Puntland? – Radio Daljir
Warbixintii 3aad: Baarlamaan Noocee ah ayay maanta u baahantahay Puntland?
Seteembar 17, 2018 10:17 b 0
Warbixintii 3aad ee Baarlamaanka, lana xiriirta Nooca Baarlamaan ee ay tahay in dalka loo soo xulo.
Deegaanno kala duwan oo Puntland ah waxaa haatan ka so socdo galaangalka xulidda xildhibaannada Baarlamaanka Puntland ee baddelaya kuwa haadan xil-hayntooda xasaanadeed ay dhammaadka tahay.
Sida caadiga ahna awoodda soo xulitaan ee xildhibaannada Baarlamaana Puntland waa mid ay leeyihiin Issimadu.
Haddaba Baarlamaan Noocee ah ayay Puntland u baahantahay in loo soo xulo kalkaan doorasho?
Warbixin arrinkaasi ku saabsan, qaybna ka ah warbixinno xiriir ah oo uu Radio Daljir ka diyaarshay arrinkaasi Baarlamaan waxaa inoo soo jeedinaya Cabdifataax Cumar Geeddi oo diyaarshay taxanayaashaasi warbixineed.
ARDAA 112 Siyaasadda & Dhaqaalaha 495 Wararka 24303
RW Khayre “Waa laga soo gudbay waqtigii Ajaanibta na dhex dhexdhexaadin jirtay”